LHRH-A3 ukusetyenziswa Fish Inaliti - China Ningbo Second hormone
Luteinizing hormone ukhulula hormone A3 for Inaliti 【Igama Veterinary Drug】 【Common Igama】: Luteinizing hormone ukhulula hormone A3 for Inaliti 【IsiNgesi Igama】: Luteinizing hormone ukhulula hormone A3 for Inaliti 【Major Ingredient】: Luteinizing hormone ukhulula hormone A3 【Inkcazelo】 : Le mveliso i okumhlophe ngumkhenkce-eyomileyo ibhloko emile okanye umgubo 【Iziphumo imithi】: hormone iziyobisi. Le imveliso kunokusenza intlanzi hypophysis ukumkhulula GTH; ukuphucula intlanzi female '...
Luteinizing hormone ukhulula hormone A 3 ukuze Inaliti
【Common Igama】: Luteinizing hormone ukhulula hormone A 3 ukuze Inaliti
【IsiNgesi Igama】: Luteinizing hormone ukhulula hormone A 3 ukuze Inaliti
【Major Ingredient】: Luteinizing hormone ukhulula hormone A 3
【Iziphumo kwemithi】: hormone iziyobisi. Le imveliso kunokusenza intlanzi hypophysis ukumkhulula GTH; ukuphucula follicle fish obhinqileyo cell estrogen leyo eya kunceda ukukhawulezisa follicle ukukhula, ovulation kunye nokuveliswa corpus luteum; ukuvuselela imveliso sperm kunye nokuvuthwa neentlanzi eyindoda. It is a odinagogue eliphezulu-ngokufanelekileyo intlanzi, ukuqinisekisa ukusebenza ngcono ingakumbi kwiindawo eentaba ezinkulu ukwahluka lobushushu diurnal kunye namahlwempu gonad ukuvuthwa yeentlanzi lomzali.
【Ziveza】: Ukukhuthaza ukukhula ngokwesondo okanye kukhawuleziswe nokwanda for lweentlanzi
【Ukusetyenziswa kunye Izikali】:
Ingca zeCARP: isitofu esinye, 1.5-3.0mcg / kg. Ngesiqingatha esithathwa iintlanzi eyindoda.
NeKubhi, bighead: iinaliti ezimbini. oyidlayo bungama 2-3mcg / kg. Le naliti lokuqala kufuneka 0.3-0.6mcg / kg. Eziseleyo lesitofu kweeyure 10-12 kamva. Ngesiqingatha esithathwa iintlanzi eyindoda.
Black zeCARP: izitofu ezimbini; inaliti lokuqala: 0.7-1.0 mcg / kg; i naliti yesibini emva kweeyure 12-14: 1.5-3.3 mcg / kg + hypophysis intlanzi: 1-3mcg / kg; ngokuba abo gonad ukukhula amahlwempu, iziyobisi ingasetyenziswa kwiintsuku 10-20 kwangaphambili.
Ukuqola lunikezelo: Ukunyibilikisa le mveliso in saline eqhelekileyo koko kancinane athontsize lo mxube ngesingqusho equlethe oleum morrhuae okanye iti oyile amaxesha ezintlanu imali ngaphezu mxube. Usile ngayo ngoxa ivuza ukuyenza emulsify. Phambi iintsuku 10-25 of zidala yoqheliso, bafake njengoko nganye 0.2-0.5mcg / kg. Akukho Inaliti okanye ngesiqingatha esithathwa iintlanzi eyindoda.
【Storage】: eziKhuselweyo ekukhanyeni, ndayitywina asondelelene, kwaye zigcinwe kwindawo epholileyo, ezimnyama
I ngentla idosi ekucetyiswa ziingcali. Umthamo ethile iya kwandiswa okanye yehle ngomyinge wezilwanyana clinical ngokunxulumene neemeko eyiyo.
Previous: LHRH-A2 ukusetyenziswa Fish Inaliti
Animal iihomoni Inaliti Kuba Dogs
Factory nomakhi hormone
Fish hormone Catfish Live
hormone Peptides yioxytocin
Lhrh-A2 Kuba Inaliti Fish Sebenzisa
Lhrh-A3 Kuba Inaliti Fish Sebenzisa